Trump iyo Kim Jong Un oo lagu dhawaaqay kulan koodii labaad ee wadahadalka xiliga uu dhacayo – Walaal24 Newss
Madaxweyne Donald Trump ayaa qaban doona shir labaad oo uu la yeelan doono hogaamiyaha North Korea Kim Jong Un si ay isku dayaan in ay heshiis ku gaadhaan heshiis si ay u joojiyaan waqooyiga hubkeeda nukliyeerka, Aqalka Cad ayaa shaaca ka qaaday Jimcihii.
Wargeyska labaad ee ka soo baxa waqooyiga Kuuriya ayaa yimid ka dib markii uu socday kulankii Trump’s 90kii daqiiqo ee ka dhacay Xafiiska Oval oo ku yaalla Washington, Wakiilka North Korea Kim Yong Chol oo safray ku tagey Washington si ay ugala hadlaan wadahadallada nukliyeerka.
Kulanka oo dhici doono dhammaadka bisha Febraayo oo lagu dhawaaqo kadib meesha uu ka dhicidoono, ayuu yiri xoghayaha wargayska White House Sarah Huckabee Sanders.
“Maraykanku wuxuu sii wadi doonaa in uu sii wado cadaadiska iyo ciqaabtiisa Waqooyiga Kuuriya ilaa aan ka aragno si buuxda oo loo xaqiijiyo,” ayay tiri Sanders
“Waxaan haynaa tallaabooyin aad u wanaagsan oo naga dhaxeeya Kuuriyada Waqooyi ee lagu sii daayay la haystayaasha iyo dhaqdhaqaaqyo kale, sidaas darteed waxaan sii wadaynaa wadahadalladan, madaxweynuhuna wuxuu u jeedaa kulanka soo socda.”
Bishii May Waqooyiga Kuuriya ayaa sii daayay sedex qof oo Mareykan ah, waxaana ay u dirtay Xoghayaha Arrimaha Dibedda Mike Pompeo ka dib kulankiisii 90-daqiiqo oo uu kula yeeshay hoggaamiyaha waqooyiga Kuuriya ee Pyongyang.
Shirwaynaha labaad ayaa muujinaya dadaalada xoojinta labada dal si ay wadahadal ugu sii wadaan. Trump wuxuu waraaqo badan la wadaagaan hoggaamiyaha Waqooyiga Kuuriya iyada oo ay jiraan horumarin la taaban karo oo ku saabsan heshiiskii lagu gaadhay kulankoodii kowaad ee bishii June ee lasoo dhaafay Singapore.
Jimcihii, Pompeo waxay la kulantay wakiilka Waqooyiga Kuuriyada ee Washington hotel ka hor kulankii Aqalka Cad labadoodba waxay wadaagaan qado.
Trump ayaa dhowr jeer ka hadlay shirkii labaad lagu wado horaantii sanadkan. Vietnam ayaa loo tixgeliyey inay tahay goob suurtagal ah oo lagu qaban karo, oo ay la socdaan Thailand, Hawaii iyo Singapore.
Ciidamada Amniga oo gacanta ku soo dhigay Horjooge ka tirsan kooxda Alshabaab